साइनसाइटिस: कारण, लक्षण र उपचार 🥇 अनलाइन पत्ता लगाउनुहोस्
अनलाइन पत्ता लगाउनुहोस्
इन्सर्ट गर्नका लागि व्हाट्सएप समूहहरू
मेम्सको व्हाट्सएप समूहहरू
मैत्री Whatsapp समूहहरु
क्रिश्चियन व्हाट्सएप समूहहरू
व्हाट्सएप संगीत समूहहरू
A देखि Z सम्मका लक्षणहरू
तरिकाहरू र सल्लाहहरू
भिडियोहरू र टिभी
LOWER FAST मा स्मूदीहरू
हरियो रस पेट को बोसो जलाउन
साइनसाइटिस: कारण, लक्षण र उपचार
अनलाइन पत्ता लगाउनुहोस् जनवरी 17, 2020 स्वास्थ्य कुनै टिप्पणीहरू छैनन्
Un साइनसाइटिस यो एक सूजन हो साइनस को। धेरै जसो समय, यो समस्या एकैसाथ वा नजिकको नाक म्यूकोसाको प्राथमिक भड़काउने प्रक्रियासँग सम्बन्धित हुन्छ। यी अवस्थामा हामी कुरा गर्छौं rhinosinusitis, जसलाई वर्गीकृत गर्न सकिन्छ तीखो, जब यसको अवधि आठ हप्ता भन्दा बढी हुँदैन, पुरानोजब रोग अवधि लामो हुन्छ, वा आवर्ती, जब बिरामीले साइनोसिटिसको तीन तीव्र एपिसोडहरू ग्रस्त हुन्छन् १२ महिनामा
नाक गुहाको शारीरिक रचनात्मक असामान्यता।
साइनोसिटिसको लागि घरेलु उपचार
El साइनस तिनीहरू हावाले भरिएका (निधार, आँखा र गालाको पछाडि) श्लेष्म झिल्लीले भरिएका क्रैनियल खाली ठाउँहरू हुन्। स्वस्थ साइनसले ब्याक्टेरिया वा अन्य कीटाणुहरू समावेश गर्दैन। सामान्यतया, बलगम बाहिर निस्कन र हावा सर्कुलेट गर्न सक्दछ। जब paranasal उद्घाटन हुन्छन् अवरोध वा बलगम को संचय, कीटाणुहरूले गुणनको लागि प्रजनन स्थल फेला पार्दछ।
साइनसको मुख्य कार्यहरू हुन्छन् तताउने, आर्द्रता र फिल्टरेशन साँस फेर्ने हावाको जुन फोक्सोमा पुग्नेछ। थप रूपमा, तिनीहरू निश्चित ध्वनिहरूको भोकलरीकरणको प्रक्रियामा कार्य गर्दछन्।
लक्षण सबैभन्दा सामान्य साइनस संक्रमण भनेको ज्वरो, गन्ध नहुनु, खोक्रा र रातमा थकाइ लाग्ने, थकान, भीड जस्ता हो। बग्ने नाक, गाढा पहेंलो रंग बग्ने नाक, सूजन र अनुहार भारी, टाउको दुख्ने र दाँत। क्रॉनिक साइनोसिटिसका लक्षणहरू प्रायः हुन्छन् नरम तर लामो विस्तार (लगभग १२ हप्ता) तीव्र साइनसाइटिसको मामिलाहरूको तुलनामा।
बच्चाहरूमा साइनोसिटिसले पनि निम्त्याउँछ frio वा अन्य श्वास रोगहरू राम्रो हुन्छन् र त्यसपछि खराब हुँदै जान्छन्। उच्च ज्वरो कालो अनुनासिक स्राव को बारे मा तीन दिन को लागी सम्बन्धित नाक बहेको - खोकीसँग वा बिना - १० दिन भन्दा बढि हुन्छ।
त्यहाँ दुई प्रकारका साइनसाइटिसहरू: एक्युट र क्रॉनिक। तीव्र साइनसाइटिसको कारणले हुन्छ जीवाणु संक्रमण धेरै जसो केसहरूमा चिसो जस्तो श्वासप्रश्वासको भाइरल संक्रमणको लेट जटिलताको रूपमा पनि यसलाई ट्रिगर गर्न सकिन्छ। जीर्ण जीवाणु संक्रमणको कारणले लामो सायनोसिटिस पनि हुन सक्छ, तर यसको प्राय जसो कारण हो जीर्ण भडकाउने रोग ब्रोन्कियल दम जस्तै
यद्यपि जुखाम तीव्र साइनसाइटिसको सबैभन्दा सामान्य कारण हो, एलर्जी भएका व्यक्तिहरू साइनसाइटिस को विकास को लागी खतरा किनभने एलर्जीको कारणले साइनस र नाकको अस्तरको जीर्ण सूजन आउन सक्छ।
यो सूजन ब्याक्टेरियाहरूको बारम्बार उन्मूलन रोक्दछ साइनस गुहा, जसले माध्यमिक ब्याक्टेरिया साइनोसिटिसको विकासको सम्भावना बढाउँदछ। यसको कारणले गर्दा, एलर्जी भएका मानिसहरूलाई यस क्षेत्रमा संक्रमणको जोखिम बिरूद्ध रोकथाम उपचारको सिफारिस गर्नु पर्दछ।
साइनस समस्या र एलर्जी भएका व्यक्तिहरूले सुर्तिजन्य पदार्थबाट जोगिनु पर्छ।, धुवाँ र कडा गन्ध जसले छातीमा दिक्क पार्छ र साइनोसिटिसको लक्षणहरू बढाउन सक्छ। A एलर्जी राइनाइटिस तपाईं साइनसाइटिसको लागि पनि जिम्मेदार हुन सक्नुहुन्छ।
इम्युनोलोजिकल वा संरचनात्मक समस्याहरूले पनि लामो साईनोसिटिस निम्त्याउन सक्छ। क्रॉनिक साइनोसाइटिस पीडित आधा भन्दा बढी बच्चाहरूलाई यो हुन्छ प्रतिरक्षा प्रणाली विकृति। सिस्टिक फाइब्रोसिस पनि लामो साइनोसिटिसको सुरुवातमा शामिल छ।
शारीरिक विकृति यो आवर्ती साइनसाइटिसको अर्को कारण हुन सक्छ। यसमा नाक निकासी नलिका साँघुरो पार्ने, polyps वा ट्यूमर को कारण नाक अवरोध, ठूलो एडेनोइड ग्रंथि आकार र विचलित सेप्टम शामिल छन्। नाक
यी अवस्थाहरूमा, जसरी औषधीहरूले प्रायः साइनोसिटिसको पुनरावृत्ति रोक्न सक्छ, बहाल सर्जरी अवरोधहरूको उपचार गर्न। थप रूपमा, विरामी साइनसिटिसको मामिलामा चिकित्सा अनुसन्धान पूरा गर्नुपर्दछ, किनकि धेरै बिरामीहरू छन् एक भन्दा बढी जोखिम कारक यस प्रकारको श्वास रोगको उपस्थिति द्वारा।
साइनसाइटिसका अन्य कारणहरू यो हुन् smoking, दन्त संक्रमण, कम प्रतिरक्षा केमोथेरापी वा एचआईभी भाइरसको कारणले र रोगहरू जसले श्वासप्रणालीको सिलियालाई ठीकसँग कार्य गर्नबाट रोक्दछ, जस्तै Kartagener सिन्ड्रोम र cilleary स्थिरता।
साइनसाइटिसको उपचार दुई मोर्चमा गर्नुपर्छ। पहिलो, यो आवश्यक छ अनलग साइनस। यसका लागि बिरामीले राम्रोसँग हाइड्रेट गर्नै पर्छ (लगभग २ लिटर पानी प्रति दिन), नुनको घोलसहित नियमित नाक धुने कार्य गर्नुहोस् र डिकन्जेस्टन्ट स्प्रे प्रयोग गर्नुहोस्।
यसको ब्याक्टेरिय मूलको कारण, साइनोसिटिसलाई एन्टिबायोटिकको साथ उपचार गर्नु पर्छ। सबै भन्दा राम्रो सिफारिश हो अमोक्सिसिलिन। एमोक्सिसिलिन उपचार असफल भएको खण्डमा विशेषज्ञले एन्टिबायोटिकको अन्य वर्गहरू लेख्नु पर्छ।
साइनसाइटिससँग लड्न सबैभन्दा सिफारिश गरिएको घरेलु उपचार भनेको यो हो मसलाको रूसी धुंध। थप रूपमा, क्यामोमाइल चिया, विशेष गरी बच्चाहरूको लागि, paranasal साइनस अवरोधको बिरूद्ध एकदम प्रभावकारी हुन्छ।
स्लिमि Sha शेकहरू
स्लिमि Ju्ग जुस
Whatsapp समूह इश्कबाई
डाउनलोड Minecraft पॉकेट संस्करण
के बिहान पिल पछि अवधि ढिलो हुन्छ?
लियोनको प्रार्थना सेन्ट मार्क
सर्पको सपना देख्दै
नि: शुल्क मनोवैज्ञानिक पठन
खुट्टा रोग -। ।
सम्पर्क लेन्स केयर
यो के हो र केको लागि हो
तपाईंको घाँटीबाट स्पाइक कसरी निकाल्ने
क्याफिन स्वास्थ्यमा उपभोगको प्रभाव
फुलेको पेट: के हुन सक्छ
मानव क्रोध: प्रसारण र उपचार।
अल्जाइमर: लक्षण र उपचार -। ।
यस ब्राउजरमा मेरो नाम, ईमेल र वेबसाइट बचत गर्नुहोस् यस पटक म टिप्पणी गर्छु।
ग्रुप प्रकाशित गर्नुहोस्
नमस्ते मेरो नाम हो लौरा ओर्टिज!
म एक सुँडेनी र सेक्सोलोजिस्ट हुँ
मेरो ब्लगमा म तिमीलाई सिकाउँछु अनलाइन पत्ता लगाउनुहोस् स्वास्थ्य जिज्ञासा।
तपाईं म संग हुनुहुन्छ?
CT News - ०२/१//२०२० (शियामीको ब्राजिलमा स्मार्टफोन उत्पादन गर्ने योजना छ) - पोडकास्टहरू
कसरी आईफोन वालपेपरको रूपमा भिडियो राख्ने
व्हाट्सएप स्थिति को लागी २० प्रेरणादायक वाक्यांश
२ best सर्वश्रेष्ठ म्याराथन श्रृंखला
Whatsapp मैत्री समूहहरु
डाउनलोड Minecraft नि: शुल्क
स्मूदीहरूले तौल गुमाउँछ
रस फ्याट बर्न
आहार पेटको बोसो जलाउने
पिल पछि ढिलाइ नियम पछि दिन
अनलाइन पत्ता लगाउनुहोस् प्रतिलिपि अधिकार © 2020।
- अनलाइन पत्ता लगाउनुहोस् - कानूनी सूचना - गोपनीयता - कुकीहरू - भाडामा लिदै - सम्पर्क